I-Sidebar yangasese ye-WordPress Nendlela Yokusebenzisana Nayo - Uchwepheshe We-Semalt
I-Artem Abgarian, i- Semalt iMenenja yeMpumelelo Ekhasimende Ephezulu, ithi kubasebenzisi abaningi bewebhu, ukususa ibha yamathuluzi e-WordPress kungase kubonakale kuyinselelo enzima. Kulesi sihloko se-SEO, izindlela ezahlukene ongasusa ngazo noma ukhubaze le barbar yangasese zikhona. Ezingqungqutheleni eziningi ze-WordPress, lokhu kuyindlela yokulungisa okuzenzakalelayo okuyinto enzima ukuyilungisa. Kwezinye izimo, izingqikithi ezihlukahlukene zingase zibe nezakhiwo ezinamakhodi eziyinkimbinkimbi ezingase zibandakanye eziningi zokuthola ibha yecala ; izicelo.
Okokuqala, ibha yecala ifika njengengxenye yokwengeza. Lokhu kusho ukuthi inefayela le-PHP empandeni yanoma yikuphi isiqondisi semibhalo. Kukhona amanye amabha yamathuluzi we-plugin namawijethijethi avela ezihlokweni noma ekufakweni kwe-plugin. Kwezinye izimo, umklami wewebhu angahlakulela ezinye izinguquko ngokwezifiso azibeka kwimisebenzi.php.
Ukukhubaza ibha yamathuluzi e-WordPress
For a WordPress user who may want to disable or move the sidebar, you can go to appearance> widgets > ibha yecala. Kusuka kule ndawo, ungakwazi ukusetha isikhundla sebha yamaceleni esikrinini sakho. Ngokwesibonelo, kungenzeka ukuba ukhethe indawo efanele ibha yamaceleni. Ezimweni ezihlukile, ibha yecala lingase lihlale endaweni efanayo. Kulezi zimo, ukususa ibha yamathuluzi e-WordPress kungase kuhilele ukulungiswa kwamanye amafayela we-PHP. Lezi zinyathelo zitholakala kulesi sihloko, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke.
Ukususa ibha yamathuluzi e-WordPress ngamafayela ephathwayo
Le ndlela ingabandakanya ukushintsha amanye amafayela obalulekile wetihloko. Lokhu kungase kungabi yindlela engcono kakhulu yokulandela kodwa kungenza ushintsho lwesikhathi esizayo ngendaba ikakhulukazi uma uhlela ukusebenzisa isihloko Ngesikhathi esizayo, khumbula ukuthi izibuyekezo zingaphezu kwezinguquko zezingqikithi. Ngenxa yalokho, kubalulekile ukufaka isihloko esisekelwe emntwaneni kumbono wakho wamanje. Kulesi sikhombiso, ukufakwa kwezingqikithi ezisemakhaya kuyindlela yokucabanga, ngakho-ke kufanele ukwazi ukuwafaka.
To make these adjustments, navigate to Appearance > Umhleli. Kulekhasi, hamba ngakwesokudla ngakwesokudla kwesikrini uphinde ungene ku-single.php, ikhasi.php namafayela e-front-page.php. Kule menyu, ungakwazi ukuthola ukuthola ibha yamaceleni ; ikhodi. Susa le khodi ngokuphelele ekulayisheni kwe-sidebar. Lokhu kulungiselelwa kufanele kulungiswe ukulungisa inkinga yangasese.
Susa nanoma yimaphi amanye amafayela lapha angase athi ngqo ukuthola ibha yecala ; isicelo. Ungasebenzisa inothi futhi ufune noma yikuphi imigqa equkethe ibha yecala ; ikhodi bese uyisusa. Lezi yizinto ezitholakala ebhokisini elingezansi eliphoqa ukulayisha kwalo ngisho nalapho ukhubaze.
Ukususa ibha yamathuluzi e-WordPress ngezihloko ezahlukene kungaba umsebenzi onzima. Lesi siqondiso singakusiza ukhubaze noma yikuphi ukubhekwa kwamabhasi we-WordPress. Ngokufanayo, i-WordPress kungenzeka. Lokhu kuguqulwa kunokwenzeka ngolwazi oluncane lonjiniyela. Ungakwazi ukubheka ikhodi yakho bese ubuka ikhodi ezama ukuqala ukuthola ibha yecala ; isicelo. Uma kwenzeka ikhodi yewebhusayithi yakho ibonakala iyinkimbinkimbi, kungase kudingeke uthintane nomthuthukisi wewebhu. Bangakusiza ukuthola imigqa efanele yekhodi okumele uyisuse ukuze uthole inqubo yonke ukusebenza.